राणा परिवारले खुट्टा धोयर पानि पिएर दिए विश्वकर्मालाई आफ्नी छोरी ! – Nepal Insider
Breaking Good News: अन्ततः कोरोना खो’प काठमाडौं आइपुग्ने मिति नै तोकियो, सबभन्दा पहिले क–कसले पाउनेछन् ?
मुख्य पृष्ठ /समाचार/राणा परिवारले खुट्टा धोयर पानि पिएर दिए विश्वकर्मालाई आफ्नी छोरी !
राणा परिवारले खुट्टा धोयर पानि पिएर दिए विश्वकर्मालाई आफ्नी छोरी ! पछिल्लो समय अन्तरजातिय विवाह अलि बाक्लै हुन थालेको छ । हालै काठमाडौंको बानेश्वर ब्याँकेटमा भइरहेको एक अन्तरजातिय विवाहले पनि सबैको ध्यान तानेको छ ।
बाजागाजा सहित हिन्दु धर्म परम्परा अनुसार राणा परिवारको छोरी र विश्वकर्माको छोराबीच विवाह भइरहेको थियो । हिन्दु धर्म परम्परा अनुसार जग्य बनाइएको थियो भने , परिसरमा नौमती वाजा वजिरहेको थियो । जग्गेको छेऊमा तामाको खड्कुँलामाथि दुल्हादुलहीको खुट्टा राखेर माइती पक्षले गोडाको जल खाँदै थिए ।
कुनै जमानामा दलितले छोएको पानी पनि नखाने कुरितीलाई ठाडो चुनौती दिँदै राणा परिवारले विश्वकर्माका छोराको गोडाको पानी पिएर छोरी अन्माइरहेका थिए । समाज परिवर्तनका लागि अन्तरजातिय विवाह गरेर उदाहरण राखेको यो परिवारले गोडाकै जल किन खाएको होला ?
परिसरमा केहीले यस्तो पनि भनिरहेका थिए, आजकालको जमानामा टिका लाइदिए भइहाल्यो नि । जलखान जरुरी छैन उनीहरुको तर्क थियो ।
ललितपुर गोदावरीका राजवहादुर राणा र भूमिका राणाले आफ्नी छोरी सुम्निमा राणालाई गोडा धोएरै कन्यादान गरी अभिराज लकान्द्री विश्वकर्मासंग विवाह गरिदिएका हुन् । सुम्निमा र अभिराज अमेरिकाको अलग–अलग शहरमा विगत चार–पाँच वर्षदेखि नै काम गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुवीच केही समय अगाडिदेखिको प्रेम थियो,लामो समय प्रेममा रहेका यि जोडीले आमाबुवाको अनुमतिमा आफ्नो लगनगाँठो कसेका हुन् । केटा पक्षवाट छोरी माग्न राणाको घरमा गएपछि कुनै नाइनास्तीबीना विवाह तय भएको थियो ।
उनी सेन्ट जेभिएर स्कुलकी फष्ट विद्याथी थिईन् । दुवै वीच भएको मगनी विवाहले समाजमा व्याप्त रहेको जातपात व्यवस्था केवल जातिवादी आडम्वर र रुढीवादी सोच रहेकोले प्रमाणित गर्दै यस्तो अन्तरजातीय विवाहले सवै जातिवीचमा भाइचारा, एकता र सहिष्णुता कायम गर्न उदाहरण दिएको छ । तस्बिर दलित अनलाईनवाट
त्यसपछि उनि आफै यो संसारबाट सधैका लागि अस्ताए….